Kamisa se’aati booda sababa du’aa George Floyd Minneapolisiti du’eef namni 3000 ol walgahii nagahaa | KWIT
Dimokraatota Iowa fi itti gaafatamtoonni umanni guuracha dhiiba gosummaa dhaabudhaf ogeesota seera kan mootuma tarkaanfi fudhachuti kan jiran yoo ta’u, yeroo gabaabati seera hirtooni yaada baaye qopheesaniiru.
Kanna keessa tokko seera malee yoo ka hindeemini poolisooni too’anno morma fayaadamuun fi nama hudhuun dhoogaadha.
Ajajni poolisi Iowa wanjala badii guddaa yookin humnaan seera alaa wayta qoranno godhan hojii ari’amani kan jedhaman ramaduun seera alaadha.
Gov. Kim Reynolds fi house speaker Pat Grassley lachuun isaanitu Republikaanota yaada isaani keenuuf hayyamama ta’uu baatanis haasawaf garuu hayyamamaa ta’uu himan.
Manni fayyaa Dakota County sababa covid-19 namni tokko dabalataan du’uu himan, waliigalati namni du’e 27 gaheera. Magaala Woodbury county keessatti duuti haarayni hin jiruu.
Hojattooni Iowa muraasni sababa covid-19 hojii dhabdumma guutachu jiru.
Iowa workforce development torbaan tarte keessa namooni haarawa 7,000 hojii dhabduma guutatanii, kunis torbaan tartee irraa 50% hir’atee jira.
Hojii dhabdumaa Iowa keessati kan guutamu itti fufaatuma deema kan didanis namootta garaa 165,000 dha.
Manni library Sioux City banuudhaf karoora akka qaban himaniiru.
Wiyxata June 15ffaa Hamilton Boulevard kan argamuu dame Perry Creek curbside awaalan banamuu ni jalqabu.
Bakkeewan biraati ummata jidduuti addaan fageenya, fayyaa fi uf eeganno bakka ummani godhuu keessatti torbaanitti nibanamu.